ဒေါ်စု အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက်မည်
VOA website မှာ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ၆၄ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့မှာ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်သူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၉ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ၂ ကြိမ် သွားရောက် ဂါဝရပြုဖို့ ရှိပါတယ်။ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်က အာဇာနည်နေ့ တက်ရောက်ဖို့ တရားဝင် ဖိတ်ကြားခဲ့တာပါ။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် မိသားစုဝင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီဝင်တွေသာ မကဘဲ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေလည်း အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အလေးပြုဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသိင်္ဂီထိုက်က တင်ပြထားပါတယ်။
လာမယ့် အင်္ဂါနေ့ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ၆၄ ကြိမ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ကို အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ၉ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် သွားရောက် ဂါရ၀ပြုဖို့ ရှိပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မနက်ပိုင်းမှာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ ဖိတ်ကြားမှုအရ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် မိသားစုဝင် အနေနဲ့ အာဇာနည်ဗိမာန်ကို သွားရောက် ဂါရ၀ပြုမှာဖြစ်ပြီး နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ ပါတီ အမှုဆောင်တွေ၊ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီဝင်တွေ အပါအ၀င် အာဇာနည်ဗိမာန်ကို ဒုတိယအကြိမ် သွားရောက် ဂါရ၀ပြုမယ်လို့ ပါတီရဲ့ ပြန်ကြားရေးမှူး ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောပါတယ်။
ရေးသားသူ စစ်စစ် at 9:34 AM0comments
အာဇာနည်နေ့ နီးလာပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိတို့ နိုင်ငံရဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အကြောင်း သိရှိနိုင်ရန်အတွက်
စုဆောင်းထားတဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ရေးသားသူ စစ်စစ် at 10:42 AM0comments
ဘာကွ... မြန်မာငွေ ပါမလာဘူး။ ဟုတ်လား။ မင်းတို့ဆီက စင်ကာပူဒေါ်လာက
လူဝင်မှု အရာရှိ၏ ဟိန်းဟောက်မှုကြောင့် အဆိုပါ စင်ကာပူသား ခေါင်းလေး
ပုဝင်သွားသည်။ ထို့နောက် မြန်မာစကား မပီကလာ ပီကလာဖြင့် "ကျနော်
ရှာဝယ်ပါသေးတယ်။ မရလို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ ထိုင်းဘတ်ပဲ ဝယ်လာခဲ့တာပါ။
မြန်မာ အကြွေတွေတော့ နည်းနည်း ပါပါတယ်။" ဟုဆိုကာ တဆယ်ကျပ်တန် နှင့်
ငါးဆယ်တန် တရွက်စီ ထုတ်ပြသည်။
ဒါနဲ့ မင်းက ဒီပိုက်ဆံလောက်နဲ့ ဘယ်မှာနေမှာတုန်း။ မှန်းစမ်း
ဗီဇာလျှောက်တုန်းက ထောက်ခံသူမှာ ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ အော်... မင်းက
ဘုန်းကြီးကျောင်းက ထောက်ခံချက်နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေမှာပေါ့။ အခု
မင်းလာတာ အလည်ဗီဇာနဲ့နော်။ အလုပ်လုပ်လို့ မရဘူး။ နားလည်တယ်နော်။ မင်းတို့
စလုံးက ကောင်တွေမပြောချင်ဘူး။ အလည်လာ ဒီမှာနေ။ တောက်တိုမယ်ရ
အလုပ်လေးလျှောက်။ အခြေအနေမကောင်းရင် ခဏပြန်ထွက် ပြီးရင်ပြန်ဝင်။ ဒီကြားထဲ
အိုဗာစတေးတွေလဲ မနည်းဘူး။ ကဲ.. ကဲ... သွားတော့။
လူဝင်မှု အရာရှိရှေ့မှ စင်ကာပူသား ခေါင်းလေးငုံ့ကာဖြင့်
ကျနော်လဲ ဘေးမှကြည့်နေမိသည်။ အော်.. တော်တော်ခက်တဲ့ စလုံးသားပဲ
မအူမလည်နဲ့။ ကျနော်တို့လို နိုင်ငံသားများအတွက်က လွယ်သည်။ ID Card ကို
အလိုအလျောက် Update လုပ်သည့် စက်ထဲ ပတ်စ်ပို့ ထည့်လိုက်လျှင် တံဆိပ်တုံး
ထုပြီးသားဖြစ်သွားသည်။ လူနဲ့ စကားပြောစရာမလို။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံသားနဲ့
နိုင်ငံခြားသား ခွဲပြီး တန်းစီခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ စစ်စစ် at 2:28 PM0comments
မရှိခိုးနိုးမလှစုန်းရိုးသည့်ရန်ကုန်မြို့ မှ ဈေးဝယ်စင်တာတချို့ 
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာ အချို့တွင် ဈေးဝယ်သူအား ပစ္စည်းခိုး
ယူဆောင်သွားသည်ဟု အထင်လွဲမှားကာ ခေါ်ယူစစ်ဆေးသည့် ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားမှု
''တစ်နေ့ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာတော့ ကျွန်တော့်ဇနီး ငိုနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးတော့ သူဒီနေ့ ဈေးဝယ်စင်တာ သွားခဲ့တယ်၊
ထမင်းဘူးဝယ်ဖို့ လိုက်ကြည့်ရင်း ရုတ်တရက် ဗိုက်နာလို့ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်၊
စင်တာက ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရှေ့နားမှာပါ။ ဒီလို ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ
နောက်ကနေ လုံခြုံရေး လိုက်လာပြီး အစ်မ ပစ္စည်းပါသွားလို့ ခဏလိုက်ခဲ့ပါ။
စစ်ဆေးချင်လို့ပါဆိုပြီး ပြောတော့ သူက ကျွန်မမယူပါဘူး၊ ဒီမှာ
ဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလည်း လက်မခံဘူး၊ အတင်းပဲ ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့သူလည်း လိုက်သွားပြီး အိတ်ကိုဖွင့်ပြ၊ ပြောပြတော့
ပြန်လို့ရပါပြီဆိုပြီး ပြောတယ်၊ ဒီလို ဖြစ်နေချိန်မှာ ဘေးနားမှာ
လူတွေအများကြီးနဲ့ သူတော်တော် ရှက်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြန်ပြောပါတယ်''ဟု
ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာ တစ်ခုတွင်
ရေးသားသူ စစ်စစ် at 10:26 AM0comments
ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီအချို့သည် ပြည်ပနိုင်ငံများ တွင် အိမ်အကူ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် နယ်မြို့များရှိ အမျိုးသမီးများအား မက်လုံးများဖြင့် စည်းရုံးခေါ်ယူလျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယင်းသို့ခေါ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသခံနှင့် ပူးပေါင်းကာ ယင်းဒေသခံအား အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီ၏ အလုပ်သမားရှာဖွေရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခေါ်ယူခြင်းပြီး ယင်းကိုယ်စားလှယ် အနေဖြင့် ခေါ်ယူပေးနိုင်သည့် လူဦးရေပေါ် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်သမားခေါ် ယူရာ၌အသက် ၂၃ နှစ်နှင့် ၃၂နှစ် ကြား ရှိ အမျိုးသမီးများအား အဓိကခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ ခေါ်ယူရာတွင်ပြည်ပ၌ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူသည် လတ်တလောတွင် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ရန် မလိုသည့်အပြင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါက အေဂျင်စီမှ ကျပ်သောင်းဂဏန်းရှိ ငွေကြေးကိုကြိုတင်ငွေအဖြစ် ထုတ်ပေးသည်ဟု သိရသည်။ ထို့ပြင် နယ်မှ ရန်ကုန်သို့ သွားရန် ကုန်ကျစရိတ်၊ ရန်ကုန်ရောက်ရှိပြီး ပြည်ပမထွက်ခွာမီ ကြားကာလအတွင်း အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နှင့် အေဂျင်စီ၏ အကျိုးဆောင်ခတို့ကိုလည်း အေဂျင်စီမှ ယာယီစိုက်ထုတ် အကုန်အကျခံပေးမည် ဟုသော ကတိများဖြင့် ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အိမ်အကူအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်သမား ခေါ်ယူရာ၌ အသက် ၂၃ နှစ်နှင့် ၃၂နှစ် ကြားရှိ အမျိုးသမီးများအား အဓိကခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်
ရေးသားသူ စစ်စစ် at 10:23 AM0comments
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ မိန့်ခွန်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု
လူထုကြီးက ကျုပ်ကိုပေးထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို
၀န်ကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထက် ကျုပ်ပိုမက်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ မှတ်ထားလိုက်ကြပါ။
ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆိုရင် ၀န်ကြီးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဟာ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ရဲ့
ခြေဖျားမှာကပ်နေတဲ့ ခြေမှုန့်လောက်ပဲလို့ ကျုပ် မှတ်ထားပါတယ်။
( ၂၀ . ၁၀ . ၁၉၄၆ )
ရေးသားသူ စစ်စစ် at 2:35 PM0comments
ရုပ်ရှင်မင်းသားအကယ်ဒမီကို ကျော်သူအားဤ post ဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါသည်
by Kyaw Thu on Thursday, October 28, 2010 at 10:53pm
ခေတ်သုံးခေတ် .. နှစ်သုံးနှစ်ကို ဖြတ်သန်း ကျွန်တော်ကျော်သူရဲ့ ဘ၀သက်တမ်း။
ကမ္ဘာလောကကြီးထဲ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ လူ့လောကကြီးထဲ ရောက်ရှိ။
ပညာရေးကို မသိ။ စီးပွားရေးကို မသိ။ ကျန်းမာရေးကို မသိ။ လူမှုရေးကို မသိ။ ဘာဆိုဘာမှ မသိ ကမ္ဘာလောကကြီးထဲရောက်ရှိ။
ရေးသားသူ စစ်စစ် at 2:06 PM0comments
လောက၌ ၊ အကျိုးပေါ်တော့မည့်
(ဓမ္မပဒ - တယောဇန ၀တ္ထု)
ကမ္မဗန္ဓု ၊ ကမ္မပဋိသရဏာ
ပစ္စည်း ဥစ္စာ ဖြစ်ကုန်၏၊
ကမ္မဒါယာဒါ၊ မိမိတို့ 
ကံသည် လျှင် အမွေခံ
တင် ပြီး ခဲ့ သော post များ
လာရောက်လည်ပတ်သူများအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။. Watermark theme. Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.